Naqshadeeyaha Affinity waa softiweer cusub oo awood leh | Abuurista khadka tooska ah
Naqshadeeyaha Affinity wuxuu u yimid inuu wax ka beddelo naqshadeynta garaafka ee Mac
Manuel Ramirez | | Design Graphic, Qalabka Naqshadeynta
Naqshadeeyaha Affinity waa mid ka mid ah sharadyadii ugu muhiimsanaa ee soo foodsaaray qalabka Adobe. Hawsha adag sababtoo ah xilligan waxaa kaliya laga heli karaa Mac ka tagida qayb wanaagsan oo naqshadeeyayaasha ah kuwaas oo u adeegsada kombuyuutarada si ay u abuuraan naqshadooda.
Isku xirnaanshaha waxaa lagu qeexaa inuu yahay midka ugu saxsan uguna dhaqsaha badan barnaamijyada naqshadeynta garaafyada ee suuqa, ha ahaato haddii aad ka shaqeyneyso qalab cusub, degello internet, icons, qaabeynta is-dhexgal ama abuurista farshaxan farshaxan. Naqshadeeyaha Affinity ayaa yimid kacaan naqshadeynta garaafka vector, inkasta oo xilligan la joogo oo keliya Mac.
Waxaa ka mid ah wanaaggeeda, Serif wuxuu sheegayaa in la shaqeynta Naqshadeynta Affinity ay kuu oggolaaneyso inaad ku shaqeyso adoo ka dhigaya 60 fps, u beddelaya walxaha qaabkooda saxda ah ee Z iyo sameynta wax hagaajinta ama ku dabaqida saameynta waqtiga dhabta ah, adigoo arki kara aragtida isla burushka ama qalabka . A qaybta barnaamijyada oo ka kooban 3: Naqshadeeyaha Affinity, Sawirka Affinity iyo Daabacaha Affinity.
Erayada guud ahaan Naqshadeeyaha Affinity wuxuu le egyahay Adobe Illustrator oo leh naqshadeynta vector-ka taasina waxay noqon kartaa aaladda ugu fiican dhammaan noocyada xirfadleyda hal-abuurka ah. Isku dar farshaxanka vector-ka iyada oo loo marayo maareynta lakabka oo leh qalab badan oo tayo sare leh oo ku saabsan dhammaystirka taabashada. Akhlaaqdeeda waxaa ka mid ah tafatirka sawir qaadista dhijitaalka ah oo leh saxitaanno iyo hagaajinno xirfadeed.
Qalabka la heli karo waa kuwa saxda ah in xirfadle kasta oo ka tirsan qaybta uu u baahan yahay iyo inaad ka heli karto barnaamijyo isku Adobe ah. Aynu nidhaahno in kasta oo Adobe uu sii wado xukunka qaybtan naqshadeynta garaafka ah, haddana waxaa xiiso leh in shirkad u muuqato mid dooneysa, inyar yar, si ay ugu dhowaato qeybteeda barnaamijyada caanka ah sida Photoshop ama Illustrator.
Laga soo bilaabo waxa laga garan karo dadka isticmaala qaarkood ee isku dayay, waxa cajiibka ah ee ku saabsan barnaamijkani waa shaqada aad ku sameyso qaababka vector iyo lakabyadaIyadoo qaar ka mid ah curyaamiintooda (ay ku jirto beta phase), waa dib u dhac jira oo wata kaniini macquulna ma'aha in la keydiyo ama lagu furo faylasha qaab ahaan .ai ama psd.
Waad ka badan kartaa macluumaad sax ah oo ku saabsan Naqshadeeyaha Affinity ka degel u gaar ah. Iyo hadaad rabto inaad kaqaybqaadato beta, ka isla xiriirkan waad iska qori kartaa si aad u soo dejiso barnaamijka. Sidoo kale kan kale, si toos ah ayaad kala soo bixi kartaa beta-ka barnaamijka loogu talagalay Mac-da Qiimaha hadda lagu heli karo waa 34,99 rodol.
Software-ka aan rajeynayno inuu keeno warar badan waana noqo bedel kan Adobe uu isagu leeyahay iyo in xitaa mar uun la "nuugo karo" Adobe lafteeda si loogu daro xirmada softiweerka naqshadeynta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Naqshadeeyaha Affinity wuxuu u yimid inuu wax ka beddelo naqshadeynta garaafka ee Mac
Midka weyn wiilka wuu cunaa, in kastoo aan rajeynayo inuusan halkan joogin! laakiin badanaa way dhacdaa: =)
Ku jawaab Manuel Ramírez
4 Waraaqaha Minimalist Icon iyo Opensource
Fikrad cusub oo ku saabsan dib-u-naqshadeynta astaanta shirkadda Adidas